Make Up Remover Eye & Lip (70ML): သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် "မျက်နှာ Scrubs & Exfoliators" ကို အွန်လိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ | Shop.com.mm
"မျက်နှာ Scrubs & Exfoliators"
Make Up Remover Eye & Lip (70ML)
More "အမျိုးသားများ" from Maybelline New York
ကုန်ပစ္စည်းMake Up Remover Eye & Lip (70ML)အကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
မျက်နှာပေါ်တွင် စွဲကျန်နေသော မိတ်ကပ်နှင့် အခြားအရာများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
Bi-phase formula ကို သုံးထားခြင်း
Sensitive ဖြစ်သောအသားအရေပိုင်ရှင်များပါ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
မေဘယ်လ်လင်းမှထုတ်လုပ်သည့် Make Up Remover Eye & Lip သည် နှုတ်ခမ်းသားနှင့် မျက်လုံးတ၀ိုက်တွင် အကောင်းဆုံး သန့်စင်ပေးနိုင်သော No.1 အရောင်းရဆုံး Liquid ပုံစံ Remover ဖြစ်သည်။ Water Proof မိတ်ကပ်များကိုပါ အလွယ်တကူ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။ နူးညံ့ပြီး sensitive ဖြစ်သော မျက်လုံး အသားအရေ ပိုင်ရှင်များပါ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးမပြုခင် ဘူးကို သေချာစွာ လှုပ်ပြီး ဂွမ်းသန့်သန့် နှင့် ဖြည်းညင်းစွာ ပွတ်ပြီးနောက် မျက်နှာသစ်နိုင်ပါသည်။ ယခုပစ္စည်းအား shop.com.mm Online Shopping Mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များMake Up Remover Eye & Lip (70ML)
Make Up Remover Eye & Lip - 70 ML
အမှတ်ပေးချက် နှင့််ဝေဖန်အကြံပြုစာ Make Up Remover Eye & Lip (70ML)
After all, this is the remover I've been using for as long as i can remember. I like it because it's so effective to take down all the make up.
အရမ်းကောင်းပါတယ် waterproof make up, eyeliner တွေအကုန်ပျက်တဲ့အတွက်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်
It's easy to use. It removes all traces of makeup and dirt on my face without harsh rubbing. It is non-irritating.
မျက်နှာပေါ်က waterproof eyeliner နဲ့ မိတ်ကပ်တွေအားလုံးကို ပြောင်အောင် ဖျက်ပေးနိုင်လို့ သဘောကျမိပါတယ်။ မျက်လုံးထဲဝင်လည်း မစပ်ဘူး alcohol လည်း မပါလို့ ချွေးပေါက်မကျယ်တော့ဘူး တကယ်ကောင်းပါတယ်